Home » Creative Writing » အရက်​သမားပို့စ်​ -၃
ရာသီဥတု ပူတဲ့ အချိန်​ဆို ​ရေကို ​နေလှမ်း​သောက်​ရသလိုလို ​နွေး​တေး​တေးနဲ့ လည်​​ချောင်းဝ​ရောက်​​တော့ ပူဆင်းသွား နှာ​ခေါင်းက ထုတ်​လိုက်​တဲ့ ထွက်​သက်​မှာ အရက်​နံ့က ကပ်​ပါသွား ။ ရင်​​ခေါင်းထဲ​ရောက်​​နေတဲ့ အရက်​က ပူပူ ။ ​ရေ​သောက်​ချင်​​သောက်​ မ​သောက်​ချင်​ ရှိတဲ့ အမြည်း (​မြေပဲဆံ​လှော်​လို ငါးမုန့်​​ကြော်​လို ) ​ကောက်​ဝါး ။ တစ်​ကယ်​တမ်းကျ​တော့ အဆီ အဆိမ့်​ များတဲ့ ​မြေပဲ ၀က်​သား အာလူး တို့နဲ့ အမြည်းလုပ်​ရင်​ မြန်​မြန်​မူး​စေတတ်​တယ်​ ။ ​နေ၀န်းနီတို့ အရက်​စ​သောက်​ချိန်​က ​ရေ​ရောမ​သောက်​တာကများတယ်​ ။ အရက်​​တွေက ဒီအချိန်​​လောက်​မပြင်း​သေးတာလဲပါတယ်​ ။ လူက ​သွေးသားတက်​ခါစ ဆို​တော့ အရက်​ရဲ့ ဒဏ်​ကို ခံနိုင်​ရည်​ရှိ​နေတာလည်းပါမယ်​ ။ ပြီး​တော့ အရက်​​သောက်​တဲ့သူ ​တော်​​တော်​များများက အမြည်းကို ပါတယ်​ဆိုရုံ ​လောက်​ပဲ ။ အမြည်းဘိုးနဲ့ အရက်​ဘိုး မှာ အမြည်းဘိုးကိုပိုပြီးနှ​မြောကြ​သေးတယ်​ ။ အမြည်းတစ်​ကျပ်​ဖိုးဝယ်​စားမဲ့အစား အရက်​တစ်​ကျပ်​ဖိုး ပို​သောက်​လိုက်​ကြတာချည့်​ပဲ ။
အမြည်းအစားနည်းပြီး အရက်​များများ​သောက်​ ပြီး​တော့ အမူးလွန်​တဲ့အခါ အိပ်​​ပျော်​သွား ။ ညစာထမင်းလွတ်​သွားတာများရင်​ လူရဲ့ ခံနိုင်​ရည်​အားကျဆင်းသွားတာပဲ ။ အရက်​က ​သောက်​တုန်းခဏ ​သွေးလည်​ပတ်​မှု မြန်​ပြီး အိပ်​​ပျော်​သွားရာက ပြန်​နိုးလာတဲ့အခါ ​သွေးကပို​လေးသွားတယ်​ ။ အိပ်​​နေရာက မှိန်းပြီး ​နေချင်​​တော့တာ ။ အဲ့အချိန်​မှာ ​ရေ​သောက်​တာနဲ့ ဆီးသွားတာကလွဲရင်​ ဘာမှမလုပ်​ချင်​​တော့တာ ။​မှေးကနဲ့ အိပ်​​ပျော်​သွားလိုက်​ နတ်​သမီး​လေး​တွေနဲ့ နဘမ်းလုံးလိုက်​ ။ ပြန်​ပြီးလန့်​နိုးလာလိုက်​နဲ့ မနက်​မိုးလင်းမှသာ မထချင်​ထချင်​နဲ့ ထပြီးမျက်​နှာသစ်​ ။ ​ရေချိုးတန်​ချိုးနဲ့ လူလည်းနဲနဲလန်း အဲ့အခါကျမှ ညကမစားခဲ့တဲ့ညစာအတွက်​ အတိုးချဗိုက်​ဆာ​တော့တာ ။
အရက်​မှာ ကယ်​လိုရီ အများကြီးပါတယ်​ ​ပြောတာပဲ ။ အဲ့ဒါ​ကြောင်​လား မသိဘူး ။ ​တော်​ရုံတန်​ရုံ မလုပ်​နိုင်​တဲ့ မတွန်းနိုင်​မဆွဲနိုင်​တဲ့ အရာ​တွေ တွန်းနိုင်​ဆွဲနိုင်​ကြတယ်​ ။ ဦ​နှောက်​က တစ်​ခြားအချိန်​ထက်​ ​ပေါ့ပါး​နေသလားမ​ပြောတတ်​ဘူး ။ ဆုံးဖြတ်​ချက်​ချတာလည်းမြန်​တယ်​ ။ ​ဒေါသထွက်​စရာရှိရင်​လည်း ရှူးဆို ဒိုင်းကနဲ ။ အဟာရဆရာ တစ်​ပါးအလိုအရ​တော့ ကယ်​လိုရီက ဓာတ်​ဆီ/ ဒီဇယ်​နဲ့ တူသတဲ့ ။ ပရိုတိန်းက အင်​ဂျင်​၀ိုင်​တို့ 2D တို့နဲ့တူသတဲ့ ။ အင်​ဂျင်​စက်​တစ်​လုံးကို ဒီဇယ်​ချည့်​ထည့်​​မောင်း​နေ အင်​ဂျင်​၀ိုင်​ လုံးလုံးမပါပဲနဲ့ ဆိုရင်​ အဲ့အင်​ဂျင်​ကခဏ​လေးနဲ့ ကျသွားမှာပဲတဲ့ ။ လူကလည်း အရက်​ချည့်​​သောက်​ပြီး အခြား အဟာရ ဖြည့်​မ​ပေးရင်​ ခဏ​လေးနဲ့ ကျသွားမှာပဲတဲ့ ။ အရက်​​သောက်​တဲ့သူက အစာကို သာမာန်​ထက်​ပိုစား​ပေးရသတဲ့​လေ
​နေ၀န်းနီ တို့က အရက်​စ​သောက်​ပါပြီဆိုကတည်းက No Limit . လစ်​မစ်​ ဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိခဲ့တာ ။ ​သောက်​နိုင်​သ​လောက်​​သောက်​ မူးလှမကမူးမှ ။ ဒါမှမဟုတ်​ ပါလာတဲ့ ပိုက်​ဆံကုန်​မှ အရက်​ဆိုင်​က ထပြန်​ချင်​တာ ။ ဝါသနာတူ မိတ်​​ဆွေနဲ့ စကားဆက်​ကမပြတ်​နိုင်​ ။ ​ကျောင်းမှာ အီး​မေဂျာက ကိုမြင့်​​ဇော်​တို့ ကို​မောင်​​မောင်​တို့နဲ့ တွဲ​သောက်​မိမှ အရက်​​သောက်​ရင်း ကဗျာ​ရေးတဲ့ အကျင့်​က ပါလာ​သေး​တော့ အရက်​​သောက်​တဲ့ ကိစ္စ ​နောက်​ပိုင်းအ​ဖော်​မပါလည်းရတယ်​ဆိုတာမျိုး​တွေဖြစ်​လာ​ရော ။ ဟုတ်​သင့်​သ​လောက်​လည်း ဟုတ်​ပါတယ်​ ။ အရက်​​သောက်​ရင်း​ပေါ်လာတဲ့ စိတ်​ကူး​လေး​တွေ စကားလုံး​လေး​တွေက ​နောက်​ကျရင်​ မှတ်​ဉာဏ်​ထဲပြန်​​ဖော်​မရ​တော့ နှ​မြောစရာ​ကောင်းတယ်​ဆိုတဲ့ အ​တွေးနဲ့ အရက်​​သောက်​ရင်း ကဗျာ​ရေးမိဖူးပါရဲ့ ။ အဲ့ ကဗျာ​ရေးရင်း အရက်​​သောက်​တယ်​လို့ ​ပြောရမလားမသိ ။
. ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ အနုပညာသည် တော်တော်များများ ဆေးသုံးကြတာ အဲဒီလို အကြောင်းရှိမှာပါ။
အဲဒီလို မူးယစ်ဆေး မပါရင် အဲဒီ အလုပ် က မဖြစ်ဘူး တဲ့လား။
.ဆြာနီ့ပို့စ်ဖတ်ပြီး ထီးဆိုင်ရဲ့ နွေနံနက်ခင်းသီချင်း သွားသတိရတယ်..
ကျနော်ကတော့ အရက်စက်ရုံ တစ်ရုံမှာ အလုပ် ဝင်လုပ်ဖူးတာကစ…. အရက်ကို မြည်းစမ်း သောက်ကြည့်နိုင်သွားတာ…
သများ အရက်ပို့(စ) လေး ကြော်ညာ ဝင်ပါရစေ။
အရက်နဲ့ မြည်းရင်တော့ ငါးသံပုရာပေါင်းတို့ ပင်လယ်စာတို့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်တွေကို ခုံမင်တယ်။
ကိုနေကြီး ရဲ့ လက်ချာကို
မနက်​​စော​စော..​ဈေးဖက်​​လျောက်​ရင်း… မဖွင့်​​သေးတဲ့အရက်​ဆိုင်​​ရှေ့.. လူ့သ​ကောင့်​သား..အရွယ်​​ကောင်း၎​ယောက်​…
ဝိရိယ​ကောင်းစွာ ဆိုင်​တံခါးအဖွင့်​​စောင့်​​နေကြတယ်​… ​တော်​​တော်​ကို…စိတ်​ပျက်​စရာ​ကောင်းတဲ့ မြင်​ကွင်းပဲ… :(( ကိုယ်​တိုင်​က ဟိုစပ်​စပ်​ဒီစပ်​စပ်​သမားမို့… အူရိုင်းမဖြစ်​​အောင်​ အကို​တွေနဲ့ပူးတွဲ​လေ့ကျင့်​ထားသူ​ပေမယ့်​… အဲ့ဒီမြင်​ကွင်းမျိုး​တော့…အ​တော်​စိတ်​ကုန်​တာ..
အရက်က ၃၁ဘုံမှာ လူ့ပြည်နဲ့ အသူရာပြည် (စိတ်ထင်) မှာပဲ ရတာဆိုတော့….
ဘုန်းကြီးသူများလို့ အောက်စဆွဲပြီး လိုရာသွင်း ရေးလိုက်ပါတယ်.
ပြောချင်တာက…. အရူပဗြဟ္မာကြီးတွေ.. မူးယစ်စေတာတွေ…စွဲနေတာဖြစ်..။
တရားထိုင်​ရင်​ ဖိုးချရင်​ ထွက်​တာက endophin ထင့်​
အရူပ ဆိုတာကို.. ခန္ဓာ..ရုပ်…တကယ်ကြီးမရှိနေဘူးယူတယ်ပေါ့…။
ဆက်​ဆွဲရင်​ အနှီဗြမာဆိုတာဂျီး တကယ်​ရှိတယ်​ ယုံသလားနဲ့ ဂိတ်​စပီး အ​ဗေတာရုပ်​ရှင်​နဲ့ ဂိတ်​ဆုံးအူးမယ်​
ကျောက်တုံးတွေ… လေတွေ.. လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေ… ဘက်တီးရီးယားတွေ.. အဲဒါတွေက.. ဘုံအဆင့်ဆင့်ဘုံသားတွေလို့… ဟိန္ဒူသာသနာကယူဆပုံရပါတယ်..။
ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါးထဲပါသမို့.. ရှောင်ကြ.. ရှားကြ…လို့… ရော့ကီးတောင်တန်းတနေရာက.. ထင်းရူးသီးကောက်ရင်း..ဆီးနှင်းပွင့်မြိုပြောလိုက်ရပါကြောင်း..
အိမ်ပေါ်ရောက် ရေချိုး ၊ ဟင်းချက်ရင်း ပုလင်းဖွင့် ၊
ဟင်းအကျက် ၄ ပက်ကွက်တိအကုန် ထမင်းစားဖို့အသင့်မို့ မဆိုးဘူးဗျ ၊
ကိုယ်တွေ့ပို့စ် ကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့လေ့လာသွားပါကြောင်း